Mmadu ole ndi Dutch ka nwere ike ikwu ugwo ha n'oge nsogbu Corona? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 21 Ka 2020	• 14 Comments
isi mmalite: l1.nl
Ọ bụrụ na ị na-eso usoro mgbasa ozi, nsogbu adịghị na Netherlands ma e wezụga nje corona, nke ka na-ezo dị ka bọmbụ na-egbu oge. Ebee ka akụkọ banyere akwụkwọ akụkọ banyere ịkọwa ahụhụ onwe onye dị n'ihu ndị mmadụ? Ọ bụghị nke ahụ siri ike inyocha ọnụ ọgụgụ RIVM ma mee ka akụkụ abụọ pụta ìhè. Medialọ ọrụ mgbasa ozi na-agbachitere iwu Rutte & Co. na Jensen onye kwuru na ọ bụghị ihe ọjọọ. Ya ogologo oge bụ na a ga-enwe mbilite n’ọnwụ ọzọ mgbe emechara steeti ndị uwe ojii wee kpochapụ ihe niile na onye ọ bụla na-akatọ. Mana gịnị kpatara na ọ nweghị onye na-elebara nhụjuanya onwe ya na nke ego anya?
Na omume, atụmatụ nkwado ndị ahụ niile kwere nkwa ga-abụkarị ajụjụ nke ndị na-eche nche, ebe a ga-esi ziga gị na counter A ruo counter B. Karịsịa, ndị Ndị ọrụ nweere onwe ha 433.000 ga-abụ spool, n'ihi na nkwado TOZO ha na 1 nke June ga-anwale ihe ha na-enweta ma ọ bụrụ na ọ gafee. Ma ọbụlagodi na ị na-enweta nkwado, ọtụtụ (gụnyere ndị na-anaghị arụ ọrụ onwe ha) nwere ike ịchọpụta na obere ọdịda ego na-akpata nwere ike bụrụ ihe na-akpata ọdachi maka ịkwụ ụgwọ ụlọ. Gọọmentị na-ahụ na nsogbu a na-adaba, yabụ atụmatụ a ga-eme ka ụgwọ mgbazinye nwa oge, mana nke a bụrịrị Kajsa Ollongren ọkụ.
Nke a bụ etu o si aga na ndọrọndọrọ ọchịchị: e guzobelarịrị eriri uhie, mana ị na-eme ụfọdụ na-eme ihe gbasara 'anyị bụ maka ya' ma ọ bụ 'anyị na-emegide ya'. Nke ahụ bụ echiche ochichi onye kwuo uche ya anyị bi na ya. Ollongron kwuru na nkwụ ụgwọ ụlọ bụ naanị maka ụlọ ọrụ ụlọ, n'ihi na ha nwere obere ego iji tinye ego na ụlọ ọhụrụ. “Ndị ụlọ ọrụ ahụ chọrọ inye ndị nwe ụlọ ohere ịgwọta ọdịnala. Dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike inyefee ndị bi na mgbazinye ego, kagbuo akụkụ nke mgbazinye ma ọ bụ belata ụgwọ ụlọ, "Kasja kwuru. Ollongren chọkwara ka ọ dịrị ya mfe iwelata ụgwọ ụlọ nwa oge. Billgwọ ọhụrụ ga-abanye ma emesịa na-emekwa ka nke a kwe omume.
Iwu ọzọ. Iwu ahụ na-efegharị na ntị anyị, mana na omume ọ na-adịgide maka ụlọ ọrụ ụlọ iji belata mgbazinye. Ma eleghi anya ha g’eme nke ahu (obughi).
N’ezie, ezigbo nsogbu bụ ndị a na - enweghị ike ịkwụ ụgwọ ọzọ ma ọ nwere ike ịbụ otu ọnwa ma ọ bụ abụọ n’azụ. Anyị amaghị maka na ọ nweghị onye na-eme nyocha. Wantchọrọ idobe nhụjuanya na ọha mmadụ n'okpuru kapeeti dị ka steeti. Mbelata ụgwọ ụlọ na-adị mma, mana gịnị ka ị na-eme megide ụlọ ọrụ na-anakọta ego na ụlọ ọrụ nchịkọta nke na-etinye ọnụ ọgụgụ dị egwu na akaụntụ nke ịgabiga? Oge ịkwụ ụgwọ ọnwa na-ebute ngwa ngwa nwere ike ibute narị narị euro na ụgwọ ndị ọzọ, ka ị wee daa ọzọ n'azụ ọnwa na-abịa.
Mgbe ahụ enwere mmeghachi nke esemokwu maka nsogbu, ebe ị na-etinye ego kpamkpam, nke a nwere ike ibute nlekọta ndị ntorobịa na-abịakwa ma lelee ma ụmụ gị agaghị enwe ike idobe ya na ezinụlọ nkuchi, n'ihi na ịnọghịzi gị lekọta ha.
Ọ bụrụ na mbelata ego (n'ihi ijeri euro) ga-enwe mmetụta na ọnụahịa dị na ụlọ ahịa ma ọ bụrụ na ụtụ isi abawanye na ogologo oge, n'ihi na a ga-akpọghachite enyemaka enyemaka ebe ọzọ, ndị mmadụ ga-abanyekwa na nsogbu.
N’ezie enwere ndi n’eme ihe oma. Ndị a bụ ndị na-arụ ọrụ maka sistemụ ahụ ma na-arụ ọrụ nlezianya na mmanye ndị ahụ niile. Probably nwere ike nweta nnukwu ọrụ dịka onye nyocha RIVM, ebe a ga-ezipụ gị n'okporo ụzọ nwalee ndị mmadụ maka corona ma ọ bụ ka ha hụ ma ndị mmadụ rapara na mita na ọkara. Enwere ike na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ịlele anya na-ahụ anya, n'ihi na ha na-eduzi ụlọ ọrụ ma na-adụ ha ọdụ banyere otu esi ahazi ụlọ ọrụ ha n'otu otu na ọkara otu. Ka ọtụtụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ gọọmentị, ọkara gọọmentị ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ na-enye ọrụ metụtara ya, ndị mmadụ ga-eritekwu uru site n'ịchịkwa na ịta ndị otu na-adịghị arụ ọrụ maka sistemụ ahụ ụgwọ.
Ogologo oge ruo mgbe Dutch ga-achọpụta nke ahụ niemand Ọ na-abịa ịzọpụta? Ogologo oge ole ka ndị na-arụ ọrụ maka sistemụ ga-ele onwe ha anya na enyo na-enweghị mmechuihu miri emi? Ka osi di, ọ bụrụhaala na ino na ndị ka n’ọnụ ọgụgụ, ịnwere ike imeri Meiland ụgwọ gị ụgwọ kama ịlụ ọgụ maka mba nwere nnwere onwe n'ezie. Olee mgbe ndị mmadụ ga-achọpụta na anyị bi n'ọchịchị onye kwuo uche ya nke ọchịchị, nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo ọtụtụ afọ gosipụtara anyị echiche nke ịhọrọ, mana na nzuzo na-agbaso isi ihe na-akpata ọnụnọ? Nanị ụzọ ọ ga - esi pụọ na ọnọdụ a bụ ezigbo mgbanwe, nke ndị mmadụ na - enweta n'ike.
Enwere ike ịme nke a site na usoro ochichi onye kwuo uche ya. N’usoro ọchịchị onye kwuo uche ya, ndị ụkọchukwu ahọpụtara nke ndị mmadụ na-akọsara ndị mmadụ. Ha na-ekpebi ọtụtụ ma iwu agafere, iwu bụ isi bụ na enweghị iwu ọ bụla ga-emebi ma ọ bụ wepụ ikike ndị dị mkpa na usoro iwu. Yabụ, ihe ọ bụla mebiri nzuzo na ahụ na ndị otu enweghị ike ịbanye n'ike dịka iwu (ọbụnadịghị iwu mgbochi ịgba ọgwụ mgbochi). Ndị mmadụ nwere ike itinye usoro ọchịchị onye kwuo uche ya site na-eleghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enweghị isi anya, ma na-ewu usoro ọhụrụ n'onwe ha. Ọtụtụ narị puku ga-egosi na ha chọrọ ime nke a. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ nnupụ isi ma gosi na anyị chọrọ mgbanwe. Gaghị emeli ezigbo mgbanwe naanị site na mkpesa maka ihe niile na-emebi; ị ga - enweta nke ahụ site n'ime ya.
Ya mere, nye aka mee ka nghazigharị ezi. Emikpu onwe gị na usoro ochichi onye kwuo uche ya nke ọma ma kekọrịta weebụsaịtị a na arịrịọ ya: www.fvvd.nl
Ihe ndekọ njikọ njikọ: bnr.nl, telegraaf.nl
Tags: nsogbu corona, coronavirus, agba, ego, mgbazinye nkwụsị, mbelata ụlọ, nsogbu, Government, mgbanwe, nkwado, nchịkọta nkwado, tozo, zzp, zzpers
Nchịkwa Facebook ọhụụ: ị ka nwere ndị na-eso ụzọ, mana ịnweghị ike izipu ya.
Ọ dị ka peeji nke Facebook m agwụla: Enweghị m ike ịdebe ihe ọ bụla ọzọ!
O doro anya na nke ahụ bụ teknuzụ arụmọrụ ma ọ bụ ha na-atụgharị ya n'ụzọ ọ bụla ..
Ekwesịrị ime ka gọọmentị / nchekwa ndị nchekwa kwalite usoro ahụ.
Na ikpughe nke ha nzuzu na usoro
Ha anaghị eche. A na-ahapụ ndị nkịtị
Amaghị nke ọma ma ekwesighi iche. A na-emebi ihe ndị ruuru mmadụ, mana ọ bụ ya mere mmadụ niile ji enwe mkpịsị aka na ọrụ gọọmentị na / ma ọ bụ ndị ọzọ na-enwe nchegbu maka 'ọrụ' ma ọ bụ ndụ banal ha.
Ọ dabara na anyị bi na 'obodo nweere onwe'.
Ndị mmadụ bịanye aka na arịrịọ ahụ ugbu a!
Ihe ọtụtụ ndị anaghị ahụ bụ na usoro a na-achọ inweta ngụkọta nke Netherlands dị ka ógbè n'ime EUSSR De facto, ọ dịlarị n'okpuru nlekọta nke Politburo na Brussels, naanị mkpuchi Corona a na-ahụ na mkpụrụ akụkụ ikpeazụ ga-adaba.
Ndị GDR bụ ụbọ akwara. nnwale maka ihe a ga-eme na kọntinenti Europe. Can nwekwara ike ịhụ nke ọma onye na-achịkwa usoro mgbanwe a, dịka JFK kwuru, ọ bụ igwe na-ejikọ ihe niile ma na-arụ ọrụ na "Mkpọchi mkpọchi".
Stasi Merkel, Vestager onye V Triager, Von der Leyen, na Timmerfrans ji anya na ihu ọma. Oge iwere ndị Stasi ọhụrụ (Eurogendfor) nwere ike ịmalite n'oge dị nso.
daalụ Salmon! Nnọọ ezigbo ajụjụ ọnụ,
Onye isi ala France nwere ezigbo nnyocha nyocha nke doro anya.
E KWESIRI EGO (nkeji 6; 19 ọ nweghị Gulag ọ nweghị KGB “Ma”)
Nkeji 4; 03 Esi Gigscard d'Estain mara
ị bụ igwefoto! Ọ bụkwa Macron bụ onye gbara aka Eurogendfor megide mmeghari “vests edo edo” nke a na-eduzi. E kwuwerị, ọ bụ nnwale-nnwale ...
ọdịnihu, mgbado anya na ngbanwe (fff = 666)
Iji maa atụ, e meela usoro dị mkpa na mmekorita n'etiti EUROGENDFOR na ndị ọrụ CSDP ndị nkịtị, na atụpụtala usoro nkwukọrịta iji kwalite ọhụhụ EUROGENDFOR.
N'afọ a, isi echiche nke ọdịnihu, mgbado na mgbanwe ga-apụta ìhè na ebumnuche anyị setịpụrụ onwe anyị.
Otu n'ime ebumnuche ndị a, ma nke dị mkpa, bụ ịkọwapụta usoro EUROGENDFOR ga-eme n'ọdịnihu.
Nke a pụtara na anyị ga-elegara anya na mmekorita mpaghara na imekọ ihe ọnụ na ndị na-abụghị EUROGENDFOR, dịka ndị mmekọ obodo na ndị ọchịchị obodo.
Togetherrụkọ ọrụ ọnụ na-eme ka anyị mụta ihe n'aka ibe anyị.
N'afọ a, Netherlands na-ahụkwa maka Njikọ International of Gendarmeries na ndị uwe ojii yana Ọnọdụ ndị agha (FIEP) na European Union Police and Program Civil Training Program (EUPCST).
Anyị ga-enyocha ma anyị nwere ike ịmepụta njikọ n'etiti nzukọ ndị a wee chọpụta otu esi akwado ibe ya kacha mma.
Maka nke ahụ enwere ike ịnwe njikọ na FRONTEX.
Otu ndị a pụrụ iche ga-agbanwerịrị ma dịrị njikere ibuga ngwa ngwa n'ọnọdụ nsogbu. Ha kwesiri itinye ikike ndi kwesiri ekwesiri iji mee ka akuko ifo banyere EUROGENDFOR.
N'ụzọ dị otu a anyị nwere ike ịzaghachi iyi egwu na nsogbu dị iche iche nke mba.
A ga-enwekwu ọchịchọ maka nke a n'ọdịnihu.
Taa, isi echiche nke ọdịnihu, mgbado anya na ngbanwe (fff = 666) dị mkpa karịa ugbu a.
AKW :KWỌ: EU Passport “Paswọdu Maka acgba Ọgwụ” Kemgbe 2018
Ihe “Atụmatụ acgba Ọgwụ” na-ewepụta atụmatụ afọ atọ maka ịkwalite “ntụkwasị obi ọgwụ mgbochi” na ịbawanye n’ihu “kọmputa”
Ekpuchitala otutu ka ha hie ura kemgbe otutu wee rie nri na koroti na enwere m nsogbu siri ike n’eche na aga achota ihe oma n’agha n’oge ihe gha na-eme n’ihu ha kemgbe ọtụtụ iri afọ.
Ọ kachasị mma ilekwasị anya na ọgbọ nke ọrịa a ga-akasị agabiga. Nam zitere Z, ụmụ akwụkwọ nwere ụgwọ enweghị echiche.
… Ruo mgbe ha nọ n'ọnụ ụzọ gị:
De Jonge: 'A manye ịpụpụ iche iche na iwu nnwale ọhụrụ amachibidoghị ya'
Ọ bụrụ na mgbanwe nke mmebe iwu ahụ abụghị n'efu, gọọmentị na-ebu amụma:
Palantir weputara ndi ozo nkwekorita COVID-19, oge a na VA
Apple na Google weputara ngosi ngosi API, na-enyere ndị ọrụ ahụ ike ọha aka hapụ ngwa
Ndị a bụ ụzọ iri ị ga - eji rụọ ọrụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụgharị nje na - anaghị atụ egwu gaa n ’ike ọchịchị ụwa
1. Bido nje nke akọwapụtara nke ọma, gbakwunye nnwale na-ezighi ezi maka ya, wee gbaa ọtụtụ ndị na-arịa ọrịa ma ọ bụ nkụda mmụọ dị ka o kwere omume ka ịmeghachi ha ule ruo mgbe ha nwalere.
2. Kwuo ọnwụ dị oke egbu egbu gị, na-enwe ike ịma ma ndị a nwụrụ nke nje ma ọ bụ na-enwere ya.
3. Mepụta 'nzaghachi' maka 'nsogbu' nke na - ebute ọtụtụ ụzọ ikike, ụfọdụ n'ime ha anọwo na - eme atụmatụ ogologo oge, ma ọ bụ naanị obere nwere ihe ọ bụla enwere ike itinye aka na mgbochi ọrịa. (Gbalia ka akagbuo ntuli aka rue mgbe amara gi nke oma ma bulie ikike nke ndi uwe ojii ijide na ijide ihe).
4. Mechie ụlọ ọgwụ gị maka ihe niile ma 'enweghị ọnọdụ'. Kagbuo ogwu a na-ahuta, akụrụ, akụrụngwa, ọrịa kansa, a na-ahụkarị GP na “nlekọta ahụike ọ bụla abụghị ihe mberede”. Yabụ na-enweghị atụ na-abawanye ihe na-akpata ọnwụ.
5. Gbanwee iwu gị n'ọtụtụ ụzọ iji mee ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwụ ọhụrụ a na-agafe nyocha na mmezi ma na-achọpụta ngwa ngwa dịka 'ihe jikọrọ 19', na nnwale na-ezighi ezi ma ọ bụ naanị site na 'ngosi ụlọ nyocha'.
6. Ọ bụrụ na ụfọdụ ndị na - abịa ọgwụ na-ajụ ịga n'ihu na nke a, gbanwee iwu iji nye otu MD, nke nwere ike ọhụụ ahụbeghị onye ọrịa, ịchọpụta ihe doro anya na uche nke ya.
7. Kọọ ọnụ ọgụgụ dị egwu nke 'ọnọdụ ọhụụ' ị hụrụ n'ihi dịgasị iche iche ndị a, dị ka ihe akaebe maka etu usoro ikike ọhụụ dị mkpa maka 'ịchekwa ndụ'.
8. N’uche n'echiche adịghị emesi ike amanyela Awụghachite (DNR) maka igwe mmadụ ọ bụla ị na-ewere ndị na-abaghị uru. (Ọ bụrụ na ekwu okwu banyere ahụhụ ụmụ mmadụ na-ata, oke nchekwa ahụike na ndị na-ekuru ikuku)
9. Echefula itinye ihe ọnwụ ọ bụla na - akpata ọnwụ.
10. Gbalịsie ike na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-akpọ onye ọ bụla na-ajụ ajụjụ ọ bụla nke a 'na -eche izu nzuzo'.
Ọchị na ị kwuru banyere martien meiland na edemede gị. Anọ m na-eche mgbe nwa oge ka ahọpụtara aha ahụ nke ọma. Ọ nwere ụda dị ka aha gị. Ọ ga-aga ruo na nke a mere na ebumnuche iji kpakọrịta aha gị na ndị mmadụ na njiri mara Martien Meiland?
Ọbụna crazier; meiland nwere agba abụọ dị iche iche, mmetụta chimeric na foto a…
Ntuli ego nke ego ahụ kọwara, ihe akụkọ maka ndị na-eti mkpu:
" Gaghị enwe ike ịbanye na ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụrụ na inyeghị aha gị na nọmba ohu na tebụl na nke ahụ bụ naanị mmalite
Maurice de Hond achọtara ihe efu na ọkara ihe mgbochi iwu (video) »
Nleta ha: 2.442.616
Martin Vrijland op iPhone na-ezochi ngwa covid-19 kachasị ọhụrụ nwelite i-OS 13.5
Sanne Lejuwaan op iPhone na-ezochi ngwa covid-19 kachasị ọhụrụ nwelite i-OS 13.5
Sephus op Maurice de Hond achọtara ihe efu na ọkara ihe mgbochi iwu (video)